खुसीको खबर : फोक्सोबाट को-रोना भाइरसकाे संक्रमण हटाउने थेरापी पत्ता लाग्यो ! – Annapurna Daily
खुसीको खबर : फोक्सोबाट को-रोना भाइरसकाे संक्रमण हटाउने थेरापी पत्ता लाग्यो !
On May 28, 2021 96
फोक्सोबाट को-रोना भाइरसकाे संक्रमण हटाउने थेरापी पत्ता लाग्यो ! विश्वभर को- रोना भाइरसले हा-हा-कार मच्चा-एको छ । केही खोपहरु आइसकेका छन् भने केही अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन् । को-रोना भाइरस फोक्सोमा पुगेर धेरै हा-नी पुर्याउछ ।
फोक्सोमा भाइरसको संक्रमण हुँदा मु-त्युको सम्भावना धेरै हुन्छ तर अब भने वैज्ञानिकहरुले को- रोना भाइरसका क-ण हट्ने थेरापी पत्ता लगाएका छन् । थेरापीले फोक्सोमा भएको भाइरसको क-णहरु हट्ने दाबी गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियाको ग्रिथिथ युनिवर्सिटीको एक टिमले यस्तो एन्टी भाइरल थेरापीबाट फोक्सोमा भएको को-भिड–१९ को क=ण ९९.९ प्रतिशत हट्ने पत्ता लागेको हो ।
आरएन डिएनए जस्तै एक प्रविधि हो । यसले आरएनको सानो टुक्रासँग काम गर्दछ । यी टुक्राहरु भाइरसको जीनोममा जोडिन्छन् र जीनोमलाई काम गर्न दिँदैनन् । यसले कोषिकाहरुलाई न-ष्ट गर्दछ ।
को- रोनाको एन्टिवाइरल उपचारहरू जनमविर र रेमाडेसिभिर, जसले को-रोनाका लक्षणहरूलाई कम गरेका छन् । साथै, यीनीहरुले को- रोनाले बिरामीहरूलाई तुरुन्त निको हुन मद्दत गरेको छ,
तर यो भाइरसलाई सीधा रोक्न पहिलो उपचारको रुपमा थेरापी पत्ता लागेको छ । यी औषधिहरु कोशिकामा ईन्जेक्शन मार्फत कोषिकामा पठाइन्छ । काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।